Madaxweyne Xasan oo dib u dhigay scodaal rasmi ah oo uu ku tegi lahaa Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st March 2016 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaabiyey socdaal uu ku joogay dalka Jamhuuriyadda Djibouti, dibna ugu soo laabtay dalka, si uu uga qeyb qaato, una horkaco dadaal dowladda ay dib u eegis ugu sameyneyso xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho oo ay dhowaan ka dhaceen weeraro kale oo argagixiso.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale dib u dhigay safar rasmi ah oo uu ku tegi lahaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden 1-da ilaa 3-da bisha March 2016.
Booqashadan ayaa looga gol lahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal. Soomaaliya iyo Sweden oo uu ka dhexeyn jiray wanaagsan siiba dhinacyada horumarinta, dib u dhiska, soo dhoweynta qaxootiga Soomaalida ee Sweden iyo gargaarka aadmiga ayaa madmadow soo kala dhex-galay kadib markii Soomaaliya la safatay Sacuudi Carabiya sanadkii hore markii ay muran siyaasadeed dhex maray Sacuudiga iyo Sweden.
Waxaa uu Madaxweynaha sheegay in marka ay xaaladda saamaxdo uu tegi doono Sweden.
Intii madaxweyne Xasan Sheekh ka maqnaa dalka, ayaa waxaa Alshabaab qaraxyo ka geysteen Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana ku dhintay ku dhawaad konto ruux oo rayid u badan.